Makambani mashanu emahotera eSpanish anoenderera nekuzvipira kune ramangwana revadiki veDominican
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » dzidzo » Makambani mashanu emahotera eSpanish anoenderera nekuzvipira kune ramangwana revadiki veDominican
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Dominica Kuputsa Nhau • dzidzo • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Musi waZvita 3, kwaive nemhemberero yekupedza vadzidzi veDominican 48 vakapinda mukirasi yechina yeiyo Chance chirongwa.
Musi waZvita 3, kwaive nemhemberero yekupedza vadzidzi veDominican 48 vakapinda mukirasi yechina yeiyo Chance chirongwa, chirongwa chekupayona chakatangwa mu2015 neMallorcan hotera cheni Barceló Hotel Group, Majestic Resorts, Iberostar Group, Grupo Piñero uye RIU Hotels & Resorts. Chinangwa chaive chekupa kudzidziswa uye mikana yemabasa kune vechidiki vari panjodzi yekuregererwa munharaunda mumaguta eDominican eBávaro neVerón, uko makambani ehotera anga aripo kwemakore mazhinji.
Vatori vechikamu vakagamuchira kudzidziswa kwemahara kuburikidza nekubatana kweNational Institute for technical-Vocational Training (INFOTEP mumadimikira ayo echiSpanish), vane vadzidzisi vekudzidzisa vakapa rairo kubva munaChikunguru 16 kusvika Gumiguru 24 muAnn uye Tedkheel Polytechnic Chikoro. Mumavhiki ekutanga, vadzidzi vakagamuchira kudzidziswa pazvinhu zvakajairika zvakaita semasvomhu, Spanish, Chirungu uye vanhu, pamwe nehunyanzvi hwekushanya, kusanganisira hotera, kicheni, bhawa uye nzvimbo dzekuchengetedza.
Mushure menguva yekudzidzira iyi, vechidiki vakatanga kudzidzira mabasa vakapatsanurwa mumapoka mubhawa, kicheni, magetsi nemhepo inodzora mhepo mumahotera mashanu emaketani ari muBávaro. Kutevera kudzidza kwavo musi waZvita 3, vadzidzi vanopasa kosi iyi vanozove nemukana- iwo "mukana" sekutaura kwevaDominican, ndosaka zita rehurongwa- kusimbisa ramangwana ravo rehunyanzvi muchikamu ichi.
Mukana wakagadzirwa mukutanga kwegore ra2015 senzira yekutanga yekubatana CSR yemaketani ehotera Barceló Hotel Group, Majestic Resorts, Iberostar Group, Grupo Piñero uye RIU Hotels & Resorts, izvo zvakauya pamwe chete nechinangwa chekusimbisa hukama hwavo muDominican Republic ne kukura kwenharaunda kuburikidza nekudzidziswa uye basa. Mushure memakirasi mana ekupedza kudzidza, uye ayo anouya mune ramangwana, chirongwa cheChance chakasimbisa chakanakira munharaunda yeDominican, nevanhu vanopfuura mazana maviri vechidiki vese vakapedza kudzidza.